အားကစား bra, Hoodies လူတို့, ယောဂဘောင်းဘီ, အမြိုးသမီးမြားအတှကျ Leggings သည် - Pluscool
2019 High quality high rise cross strap back se...
Ladies sublimated polyester spandex compression...
Hot-selling high waisted workout mesh yoga legg...
Performance worlds best board shorts for girl ...
High qualiy factory price Sexy style spandex ho...
Factory price Sexy style spandex hot yoga pants...
7/8 Sexy style spandex hot yoga pants compressi...
Sexy style spandex hot yoga pants compression g...
IMAGINE FADENESS LOGO EFFECTIVE IN SPORTY
Yichun Pluscool အားကစား, ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာ၏စိတ်ကူးတို့ကစိတ်ထက်သန်နေပါသည်လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်စတိုင် 2016 အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအုပ်စုငွေကြေးထောက်ပံ့နေသည်, သူတို့ကကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းများမှာမြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကိုအားကစားဘို့လိုအပ်ကြောင်း addressing ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ, Pluscool အားကစားကိုဖန်တီးရန်ထွက်ထားကြ၏။
Pluscool အားကစားအားကစားဘရာစီယာ, leggings, ယောဂ wear, အားကစားရုံ wear, compression wear, အဖုအစောင့်, စတာတွေအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောအားကစားအထူးပြု "ရပ်တန့်-အသုံးပြုသူပထမဦးဆုံး" ကိုအတွေးအခေါ်မှားယွင်းကျနော်တို့ကျွမ်းကျင်ပုံစံဒီဇိုင်နာများ, အတွေ့အကြုံရှိအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် QC န်ထမ်းများစုဆောင်းခဲ့ကြ အပ်ချုပ်အတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော်နှင့်အလုပျသမား။
Pluscool အားကစားထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရှိသည်။ ကျနော်တို့တန်ဖိုးထားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်လုပ်နေပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနားလည်ပြီး, ငါတို့သည်ငါတို့၏ဂုဏ်သတင်းမှအဆင်ပြေလူနေမှုတက်ခံစားရတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၏ကဏ်ဍအတှကျတာဝနျရှိဖြစ်ရမည်။
Yigong လမ်းမကြီး No.819, စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်, Yichun စီးတီး, တရုတ် Jiangxi ပြည်နယ်